Vidio Ndị Dị na JW.ORG Enyerela Ụmụ Akwụkwọ Saụt Koria Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
SOO-JEONG, bụ́ onye nkụzi na-enye ụmụ akwụkwọ ndụmọdụ n’otu ulọ akwụkwọ sekọndrị dị na Saụt Koria, ejirila vidio ndị dị na jw.org kụziere ụmụ akwụkwọ ya ihe. Ọ sịrị: “Ụmụ akwụkwọ ahụ mere ihe tụrụ m n’anya mgbe ha lechara vidio aha ya bụ Olee Otú E Si Amata Ezigbo Enyi? Ha kwuru, sị: ‘Anyị esitụbeghị otú a chee gbasara imeta enyi. Otú a e si kụziere anyị ihe a magburu onwe ya.’ Ụfọdụ n’ime ha sị na ha ga-aga na jw.org mgbe ọ bụla ha chọrọ ịmata ihe ha ga-eme.” Soo-jeong kwukwara, sị: “Agwala m ndị nkụzi ibe m ka ha were vidio ahụ na-akụzi ihe. Ha na-enwekwa obi ụtọ iji ya akụziri ụmụ akwụkwọ ha ihe.”
Vidio ọzọ nyeerela ọtụtụ ụmụ akwụkwọ nọ na Saụt Koria aka bụ katuun a na-ese na bọọdụ nke isiokwu ya bụ Otú Ị Ga-esi Emeri Onye Na-achọ Gị Okwu n’Emetụghị Ya Aka. Otu onye nkụzi na-arụ n’ebe a na-akpọ Juvenile Violence Prevention Foundation gosiri ya ụmụ akwụkwọ ya. O kwuru, sị: “Ihe mere katuun a ji amasịkarị ọtụtụ ndị na-eto eto bụ n’ihi otú e si ese ihe ndị a na-egosi na ya. Ọ na-akụzikwara ha ihe ha ga-eme ma mmadụ chọwa ha okwu na ihe ha ga-eme iji gbochie mmadụ ịchọ ha okwu.” Ụlọ ọrụ ahụ nataziri ikike iji vidio ahụ na-akụzi ihe. Ha na-eji ya akụziri ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ihe. Ndị uwe ojii na-ejikwa vidio ndị dị na jw.org enyere ndị mmadụ aka.
Ọ bụrụ na ị gatụbeghị na jw.org/ig, biko gbalịa gaa. Ọ dị mfe ịchọta ihe na ya. Ị gaghị akwụ ụgwọ iji danloduo ihe ndị a na-egere egere, vidio, Baịbụl na ihe ndị ọzọ dị na ya.